खसी बोकोको मूल्य निर्धारण नहुँदा उपभोक्ता ठगिदै - inaruwaonline.com
खसी बोकोको मूल्य निर्धारण नहुँदा उपभोक्ता ठगिदै
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन १७, २०७३ समय: १५:१२:२७
राजविराज नगरको मालपोत कार्यालय अगाडी अतिव्यस्त सडकमा लागेको खशीबोकाको हटिया
१८ असोज, दिलिप साह, राजविराज। हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान पर्व दशैं घरआँगनमा आइपुग्दापनि सप्तरी जिल्लामा खसीबोकाको उचित मूल्य निर्धारण नगरिएको कारण उपभोक्ताहरु ठगिनु परेको छ । राजविराज नगरमा एक मात्र खसीबोका अव्यवस्थित बजारमा व्यापारीहरुले आफुखशी लागेको मूल्य भनेर खसीबोका बेच्ने गरेको कारण उपभोक्ताहरु ठगिदै गएका हुन ।
दशैमा खसीबोका अत्यधिक मात्रामा बिक्री हुने गरेकोले नीजि तथा व्यापारीले खसीबोका अनुसार मूल्य भनेर त्यसमा मोलतोल गरी खरिबबिक्री भइरहेको उपभोक्ता राजविराज–५ निवासी हेमनारायण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बोकाको न्यूनतम मूल्य रु. पाँच हजारदेखि रु. १४ हजार सम्ममा बिक्री हुने गरेको भन्दै उहाँले खसीको रु.१० हजारदेखि रु.३०-४० हजार सम्ममा बिक्री भइरहेको बताउनुभयो । दशैमा खसी भन्दा बोकाको बली दिने हुँदा यसको माग पनि बढी रहेको जानकारी दिदै उहाँले यहाँ तौल अनुसार खरिब बिक्री हुने नगरेको बताउनुभयो ।
यता नगरमा खसीबोकाको व्यवस्थित स्थानको अभावमा प्रायः अड्डा रोडको मालपोत कार्यालय अगाडी सडकमै खसीबोको हटिया आयोजना हुने गरेको छ । अतिव्यस्त उक्त सडक खण्डमा बजार लागेको बेला पैदल यात्रु, सवारी साधन सहितलाई आउजाउ गर्न निकै समस्या हुने गरेको सवारी धनी मनोज माझीले जानकरी दिनुभयो ।
विगतका दशैमा नगर स्थित डिहबार स्थानमा खसीबोका बजारलाई व्यस्थित तरिकाले खरिदबक्रीको व्यवस्था मिलाउने गरेको थियो । तर, त्यो स्थान पनि अपुग हुने हुँदा सिरहा सडक सम्ममा खसीबोका बिक्री स्थलको रुपमा प्रयोग गरिदा बाटो नै जाम हुने गरेको छ ।
दशैमा सप्तमी, अष्टमी र नवमीमा जिल्लाको छिन्नमस्ता, कंकालीनी, डाकनी लगायतको मन्दिरमा खसीको भन्दा ९० प्रतिशत बोकाको बढी बली प्रदान हुने गरिन्छ । प्रायः बोकाको बली भाकल गरेको हुन्छ । मनोकामना, इच्छा पूरा भएपछि यसै समयमा बली दिने चलन रहेको छ ।